BIA IHOSY: NANDRAY NY FIBAIKOANA NY KOLONELY RAKOTOARIJAONA EUGÈNE
On oct 30, 2019 8 505
(Mpanao gazety mada24-Fianarantsoa)
Tontosa omaly, tao amin’ny toby miaramila ao Ihosy, ny fifamindram-pibaikoana teo amin’ny kaomandy ny vondrona voalohany iraisam –piadiana na BIA. Roa taona aty aoriana voatendry amin’ny andraikitra hafa, ny kolonely, Rakotozafy Derandraibe Andriandraozy, lehibe teo aloha. Nandimby azy ao amin’ny fibaikoana , ny kolonely Rakotoarijaona Eugène.
Betsaka ny vokatra azon’ny BIA, nandritra ny roa taona nametrahana azy, ny taona 2017. Anisan’izany, ny ezaka fampandriana fahalemana tamin’ny faritra maromaro tato amin’ny faritany Fianarantsoa: Isandra, Vohibato. Tamin’ny alalan’ny ZRPS Alfa no nahazoana izany.
Ny Kolonely Rakotozafy Derandraibe, kaomandy teo alohan’ny BIA-Ihosy ( Sary: Tovolahy M.)
» Iraka maherin’ny 5OO no tontosan’ ny miaramila nanomboka ny taona 2017. 3160 ny omby very ka tafaverina amin’ny tompony ny 2512 . Nahatratra basy mahery vaika miisa roa ,Basim-borona telo ,basy vita Gasy miisa 6 ny Tafika Malagasy. Ankoatra izay, nahatratra zava-maha-domelina maro ny mpamita iraka. Nisy koa ny takalon’aina miisa roa, avotra soa aman-tsara tany amin’ny faritra androy. tsy nijanona amin’ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana ny asa natao, nisy ny fikojakojana ny tontolo iainana« , hoy hatrany ny Kolonely Rakotozafy Derandraibe A. Tsiahivina fa voatendry hibaiko ny vondrona Etamazaoro faha-dimy any Toliara izy taorian’ny BIA Ihosy.
Ho an’ny kaomandy vaovao eo anivon’ny BIA, Ihosy, ny kolobely Rakotoarijaona Eugene indray, mazava ny fanamby. Laharam-pahamehana ho azy, ny fanatsarana ny fiaimpiaina’ny miaramila, amin’ny ankapobeny. » Hojerena ihany koa ny fifehezana ny fitaovam-piadiana sy ny bala ao ihosy sy ny manodidina. Ezahina ny tsy hisian’ny asan-dahalo, fara-faharatsiny ny fienany. Handray anjara mivantana amin’ny tetikasam-panjakana amin’ny hanatsarana ny tontolo ambanivohitra sy ny tontolo iainana koa izahay eto anivon’ny BIA », hoy izy nandaha-teny.
Nitarika ny lanonana tany Ihosy, omaly ny lehiben’ny Etamazaoro jeneralin’ny Tafika Malagasy, ny Général de Division (GDI) Rakotonirina Théophile. Ity farany izay nilaza tamin’ny kabary nataony fa : « Manao ezaka ny Filoham-pirenena, Rajoelina Andry, amin’ny famerenana ny fandriampahalemana. Noho izay indrindra no nanekeny ny nampitoboana ny isan’ny ZRPS ho lasa dimy ankehitriny sy mbola nanampiany hatrany ny fitaovana ho enti-miasa, toy ny basy, fiara, fiaramanidina, ny angidim-by« .
Ny lehiben’ny Etamazaoro Jeneralin’ny Tafika Malagasy, ny GDI Rakotonirina Théophile, nitarika ny fisafoana ny andian-tafika, omaly, tao Ihosy. (Sary:Tovolahy M.)
Tsiahivina, fa notolorana ny mari-boninahitra commandeur de l’ordre national, ny kolonely Rakotozafy Derandraibe, kaomandin’ny BIA teo aloha.
ITASY: TAFAPETRAKA TAMIN’NY FOMBA OFISIALY NY GOVERNORA VAOVAO
ANTOKO UNDD: HANAO FANAMBARANA MOMBA NY RAHARAHAM-PIRENENA RAHAMPITSO